> Resource> Naghachi> Olee otú iji weghachite ehichapụ Text Ozi (Android & iOS)
Ọ bụrụ na ị na mberede ehichapụ ozi ederede na ekwentị gị na-achọ inwe ha azụ mgbe e mesịrị, ị na-na na-nri ebe ugbu a. Isiokwu a na-aga ịme ka ị irè ụzọ naghachi ehichapụ ozi ederede si dị iche iche ekwe ntị, n'agbanyeghị na ọ na-dabeere Android ma ọ bụ iOS. Dị nnọọ họrọ ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na ị n'okpuru na-eso ya na-enwe na-agbalị.
Part 1: Naghachi ehichapụ ozi ederede site na iOS ngwaọrụ
Part 2: Naghachi ehichapụ ozi na iTunes ndabere
Part 3: weghachite ehichapụ ozi ederede site na gam akporo igwe
Naghachi ozi site na iOS ngwaọrụ, ị mkpa nwere iOS data mgbake ngwá ọrụ mbụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu onye, ​​i nwere ike inwe m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), nke nwere ike na-ike iṅomi iPhone, iPad na iPod aka ịchọta furu efu data na ha , gụnyere iMessages na ozi Mgbakwụnye. Tupu mgbake, ọ na-ahapụ gị ịhụchalụ niile ọdịnaya mbụ. Ugbu a ibudata ikpe mbipute n'okpuru nwere a-agbalị.
Ọzọ, ka na-na Windows version dị ka a na-agbalị na nzọụkwụ ọnụ. Mac ọrụ nwekwara ike na-eso nzọụkwụ n'okpuru. Ma nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na ike iṅomi ya
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, na-na ngwaọrụ gị jikọọ na kọmputa na iji eriri USB. Mgbe ihe omume ahụ na-amata na ngwaọrụ gị, ọ ga-eduzi gị ka iṅomi ngwaọrụ gị site na isoro nkọwa na ya window dị ka ndị a.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 ọrụ, ị ga-ahụ na windo n'okpuru. Wee soro nkọwa na-esi gị ngwaọrụ scanned: pịa Ike na Home buttons n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd mgbe ị pịa na Malite bọtịnụ. Wee hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 10 sekọnd, ruo mgbe ị ga-esi n'ime scanning mode. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi ngwaọrụ gị.
N'ihi na ndị ọzọ ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka, ị ga-ahụ ihe omume si window n'okpuru. Ihe ị chọrọ ime bụ kpọmkwem pịa na Malite iṅomi button na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị furu efu ozi na ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ehichapụ ozi
The scanning usoro ga-eri gị a obere mgbe. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị ga-enweta a Doppler N'ihi. E nwere, niile recoverable data hụrụ na ngwaọrụ gị na-haziri na edemede. N'ihi na ozi, ị nwere ike họrọ ihe Ozi na Ozi Mgbakwụnye. Tinye akà rà na ozi ị chọrọ mgbe ị na-Michael. Wee pịa na Naghachi button iji nweta ha niile echekwara na na kọmputa gị na otu click.
E wezụga ehichapụ ozi, a usoro na-egosiputa nile dị na ozi na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ndabere na-ehichapụ ihe, ị nwere ike ikewapụ ha site mbịne na bọtịnụ nke naanị gosipụta ehichapụ ihe. Mgbe ahụ ị ga-ahụ naanị ihe ị chọrọ na ike naputa ha selectively.
Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ na-ehichapụ ozi ederede site kpọmkwem ịgụ isiokwu gị iDevice, ị nwere ike ịgbanwee gaa na-esi na ha site adịrị iTunes ndabere, ma na e nwere tupu ọnọdụ na i synced ngwaọrụ gị na iTunes n'ihu. iTunes adịghị ekwe ka onye ọ bụla na-ele ndabere ọdịnaya. Ya mere ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịchọta ụzọ ka ịhụchalụ na ego nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya. Ị nwekwara ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). Ọ bụghị naanị na ike iṅomi ngwaọrụ, ọ na-ahapụ gị wepụ iTunes nkwado ndabere na mpaghara selectively nweta ihe ọ bụla ị na-amasị ya. Ọzọ, na-ahapụ nwere a na-agbalị ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iTunes ndabere ma wepụ ya
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ime ka ndị ọzọ mgbake mode n'elu nke ya isi window: naputa site na iTunes ndabere File. Mgbe ị na-aga n'ebe ahụ, usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịhụ na-egosipụta niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị, na ị ga-ahụ na windo n'okpuru. Họrọ onye ị chọrọ wepụ na pịa Malite iṅomi ime na.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake
Mgbe iṅomi zuru ezu, i nwere ike ịgụ dum ọdịnaya nke iTunes na nkwado ndabere na Doppler N'ihi. Họrọ udi nke Ozi, ebe niile ozi na iMesssages na-enịm. I nwere ike ịgụ ha n'ụzọ zuru ezu. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ na pịa na Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Nkebi nke 3: weghachite ehichapụ ozi ederede site na gam akporo igwe
Bụghị onye iOS ngwaọrụ ọrụ? E nwekwara a zuru ezu ndu n'ihi na gam akporo ọrụ banyere otú naghachi ehichapụ ozi ederede na Android ngwaọrụ. Kama Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery), i kwesịrị iji Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) iji weghachite ehichapụ ozi na Android igwe. Dị nnọọ ka otu maka iOS, Wondershare Dr.Fone for Android-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi dị iche iche gam akporo igwe naghachi ehichapụ ozi, kọntaktị, photos, videos, ọdịyo na akwụkwọ. Ọzọkwa, ọ na-enye gị a ikpe version, nke na-enyere gị aka iṅomi ma ịhụchalụ recoverable data mbụ. Ka ibudata ya n'okpuru nwere a na-agbalị ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Kwado USB debugging na gị android ngwaọrụ
Tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, i kwesịrị inwe ike USB debugging na gị android ngwaọrụ mbụ. Ọ bụrụ na ị na-ama nyeere ya, ị nwere ike na-awụlikwa elu ka nzọụkwụ ọzọ. Bụrụ na ọ bụghị, biko ego ya site na isoro nkọwa na window nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2. Malite ịgụ isiokwu gị gam akporo ngwaọrụ
Mgbe nyeere USB debugging, ị ga-eduzi n'ebe: iṅomi ngwaọrụ gị. Tupu scanning, i kwesịrị ijide n'aka na batrị nke ngwaọrụ gị bụ karịa 20%, nke mere na ị nwere ike mezue scanning usoro ọma. Wee pịa na Malite na-amalite. N'oge iṅomi, otú na-ngwaọrụ ejikọrọ oge niile.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake
N'ezie, i nwere ike na-amalite Michael hụrụ data na Doppler N'ihi n'oge iṅomi. Mgbe ị na chọtara ihe ị chọrọ, ị nwere ike ịkwụsị Doppler n'oge ọ bụla. Mgbe ahọrọ ihe ị chọrọ na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Top Ụzọ izipu ozi ederede site iPad
Olee otú izipu ozi ederede site Mac ka ekwentị mkpanaaka na
Esi nweta iOS 9 ndabere faịlụ
Top 10 nkebi njikwa - kacha mma ike mbanye nkebi software
Nzọụkwụ na-agbake ehichapụ ma ọ bụ mebie Mp3 faịlụ
Nexus 4 Data Naghachi: Naghachi Nexus 4 Lost ma ọ bụ ehichapụ foto na vidiyo